2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Chemical Abstracts Services) Ndenye aha 22536-61-4
Ịmara ahụike > 2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Chemical Abstracts Services) Ndenye aha 22536-61-4
08 / 18 / 2018Ihe site: APICMOCategory: Ịmara ahụike0 amasị
Njirimara nke anụ ahụ na nke chemical nke 2-Chloro-5-methylpyrimidine
2- Chloro-5 methylpyrimidine nwere uhie na-acha odo odo na-acha uhie uhie na-acha ọkụ ọkụ. Ụfọdụ ga-akọwa onyinyo ndò dị ka ndị na-acha ọcha. O nweghị isi na ihe dị arọ nke 128.56 grams kwa ahihia. E kwuru na usoro ọgwụ ya bụ C5H5CIN2 na Simplified Molecular - System Entry System (SMILES) dika CC1 = CN = C (CL) N = C1. Ngwakọta ahụ nwere ebe na-agbaze nke na-adị n'etiti 89-92 degrees centigrade, na ebe na-esi na 239 .2 degrees na 750mm / hg. A siri ike na mmiri. A na-ere ya ma na-ere ya dị ka ụlọ ọgwụ na-emepụta ọgwụ na-egosi na ọ dị ọcha n'etiti 97% na 98%, nke kachasị dị ka 95%. Ngwurugwu nke otu nchịkọta nke 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) bụ ihe dịka 1.169 grams kwa mpempe akwụkwọ na 25 degrees centigrade. Ngwunye nke vaporization bụ 45.68 KJ / mol na nrụrụ vaịn a tụrụ na ihe dịka 0.0626 mmHg na 25 degrees Celsius. Ihe jikọrọ ha na 2-chloro-5-methylprimidine bụ: Pyrimidine, 2-Chloro-5-methylpyrimidine, 2-chloro-5-methyl- (8Cl, 9Cl) na 5-methyl-2- chloropyrimidine.
Nkwadebe nke 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4)
2-chloro-5 methylpyrimidine nwere ike ịmepụta site n'iji ọtụtụ ụzọ. Omume a na-eme maka nkwadebe bụ iji nweta ya dịka 25% nke ngwaahịa ahụ si na mmeghachi omume n'etiti phosphorus oxychloride na 3-methylpyridine 1-oxide. Otú ọ dị, iji nweta mkpụrụ ka elu, 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) nwere ike ịkwadebe site na ịmeghachi phosphorus oxychloride na 3-methylpyridine 1 - Oxide. Mgbanwe a gụnyere imepụta mmeghachi omume ya na ngwakọta mmanụ na-edozi ahụ bụ nke dị na ya na diluent (ọkacha mma nke na-eme ka ihe na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe) na-arụ ọrụ na okpomọkụ dị n'etiti -50 degrees na + 50 degrees Celsius. Enwere ike ị nweta 70% site na iji ụzọ dị iche iche. Edebewo ihe a na-ekwu banyere 96%, ọ bụ ezie na ndị a nwere nkwarụ siri ike na-esiri ike ịgafe, na-egbu egbu, karịsịa n'ọtụtụ buru ibu na-agaghị ekwe omume. Nhọrọ nke usoro nkwadebe ahọpụtara nwere ike imetụta ọnụọgụ nke onye chọrọ iji mepụta ma dị mfe nkewa nke ndị ọzọ site na ngwaahịa. Ka o sina dị, dabere n'iji ngwaahịa gị eme ihe, ị nwere ike ịchọpụta usoro eji eme nkwadebe, ma ọ bụ họrọ usoro kwesịrị ekwesị ị ga - achọ iji mee ihe ma ọ bụrụ na ị ga - eme nkwadebe n'onwe gị.
Kedu kpọmkwem otu Pyramidine?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ha bụ ogige aromatic na carbon na Nitrogen atom na ụda isii. Oghere ahụ na-adịgide adịgide. Ngwurugwu Pyramidine, ruo ogologo oge ugbu a, na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịzụlite ọgwụ ma ọ bụ na ha na ogwe aka ndị ọzọ. A na-eji ha eme ihe, ma na-anọgide na-eji ha mee ihe n'ọtụtụ dịgasị iche iche nke ọgwụ ndị gụnyere, ma ọ bụghị nanị na, ọgwụ maka ọgwụgwọ ọbara mgbali elu, ọgwụ mgbochi epilepsy, ọrịa anesthetics n'ozuzu, ọgwụ ọjọọ malarial na ọbụna na ọgwụ nke ọgwụ nje HIV . Ihe anyị na-elekwasị anya n'isiokwu a bụ na 2-chloro-5 methylpyramidine na ojiji ya dị ka etiti
Na-eji na ngwa nke 2- Chloro-5-methylpyramidine
A na-eji ya eme ihe n'egwuregwu; bụ ndị a na-ejikarị eme ihe dị ka ihe na-egbu pesticide dị ka acetamiprid, imidacloprid, dịka osisi ọgwụ yana bactericide. A na-ejikwa ya dị ka ụlọ ahịa ọgwụ, ụlọ ọrụ na-emepụta catalytic na mgbakwunye petrochemical. 2- Chloro-5-methylpyramidine e jiri mee ihe n'ime oghere neonicotinoid ọhụrụ nwere ọrụ ụmụ ahụhụ. Ndị ọzọ eji eme ihe na Agro ngwaahịa gụnyere: Imidacloprid, Acetamiprid, Nitenpyram, NTN32693. Ndị a egosila na arụmọrụ na-arụ ọrụ na ma ụlọ obibi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji bibie ụmụ ahụhụ na-emebi mkpụrụ osisi, ihe oriri ma ọ bụ ọka ọṅụṅụ.
Ogige ọgwụ ndị ọzọ nke 2-Chloro-5 methylpyramidine nwere ike iji mee ka ịgụnye:
Nchekwa na Ụgbọ njem
A maara 2-Chloro-5 methylpyramidine ka ọ bụrụ nke nwere ike na-echekwa echekwa mgbe echekwara ya n'okpuru ọnọdụ ndị a tụrụ aro: Na igwe okpomọkụ. Egbula iji aluminum ma ọ bụ ihe ndị nwere galvanized, dị ka ngwakọta ga-eme ihe ndị a iji mepụta hydrogen gas bụ nke nwere ike mejupụta ikuku na ikuku. Gbaa mbọ hụ na ị na-eleba mkpụrụ mmiri anya mgbe niile iji chọpụta ma na-agbanye n'ọkụ ma ọ bụ na-agbapu ngwa ngwa.
N'ihi nkwụsi ike ya na ọdịdị na-adịghị ize ndụ, 2-chloro-5-methylpyramidine nwere ike ibugharị ma ọ bụ ikuku ma ọ bụ oké osimiri. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na mmiri ọgwụ ndị na-ekpo ọkụ, carbon oxides, na nitrogen oxides, n'ihi ya a na-adụ ọdụ ịhọrọ ụgbọ njem ma ọ bụ nchekwa nchekwa na enweghị ọhụụ na nke ọ bụla n'ime ogige ndị a. Ekwesiri imechi ihe nkpuchi ya, na ebe di nma ma kpomkwem
Idozi aka, Nlekọta Nchebe, Mgbochi na Mgbochi Ọkụ
Na-eyi ngwa ngwa nchedo dịka ogwe aka na-eguzogide ọgwụ na nchebe nchekwa mgbe ị na-emeso ya 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) iji zere ozi ọ bụla na anya ma ọ bụ akpụkpọahụ. Zere ikuku mmiri, vapo ma ọ bụ gas: Jiri ya mee ihe mgbe niile. A chọpụtala na ịmịkọrọ ahụ na-enwe mmetụta ahụ ike. Dị ka mgbe niile, gbalịsie ike na-eme ezigbo nlezianya na nchebe ụlọ ọrụ.
Ka o sina dị, Ọ bụrụ na ị nwere ihe mberede na-emeri: Rịọ ọnụ na mmiri ma jụọ dọkịta. N'ihe gbasara inhalation: Bufee onye (s) emetụta ya na ikuku dị elu ma ọ bụrụ na ha anaghị eku ume, gaa n'ihu na-enye respiration mmiri, ma jụọ dọkịta. Maka ịchọta akpụkpọ ahụ na-abaghị uru, hichaa akụkụ ahụ emetụta ya nke ọma na ncha na mmiri maka opekempe nkeji iri na ise ma wepụ uwe ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ọ bụla. 2-chloro-5-methylpyrimidine nwere ike ime ka akpụkpọ anụ ahụ ma ọ bụ mee ka uche doo. Gaa n'ihu ịkpọtụrụ onye dọkịta.
2-chloro-5-methyl pyrimidine kwesịrị iwepu ya dịka ihe mkpofu pụrụ iche. Nke a na-egosi na a ghaghị itinye ndokwa pụrụ iche, jiri ụlọ ọrụ na-ekpochapụ akwụkwọ ikike na njikọ gị na mkpofu mkpofu mpaghara gị iji hụ na ị kwadoro iwu obodo na mpaghara. E kwesịghị ịmepụta ụlọ ahụ n'ime mmiri, ma ọ bụrụ na ájá na-efesa, vermiculite n'ime akpa a kara akara ma wepụta ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Iji gbanyụọ ọkụ n'ihi 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) combustion otu nwere ike iji ọkụ ọkụ extinguishers ọkụ, Carbon (IV) oxide, polymer ụfụfụ ma ọ bụ mmanya na-eguzogide ọgwụ extinguishers. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye kwesịrị itinye ngwá agha ọkụ na-ekpuchi ya na ihe iku ume iji belata ihe ize ndụ nke ọkụ.
N'ihe banyere njedebe nke njedebe ọrụ, 2-chloro-5-methylpyramid enweghi oke ike dị na ebe. A na-atụle ịkpachapụ anya dịka igwe ọkụ ọkụ maka ndị injinia n'oge ejizi.
Previous Previous post: Alex Rodriges
Osote Next post: Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ogige aghara